Tag: taratasy fotsy | Martech Zone
Tag: taratasy fotsy
Lisitry ny lisitry ny lozisialy momba ny tranokala: ny 67 Ultimate Must-Haves amin'ny tranokalanao
Zoma, Oktobra 2, 2020 Alahady, Martsa 7, 2021 Douglas Karr
Wow. Tiako izany rehefa misy mamolavola lisitra fizahana amin'ny infographic izay sady tsotra no misy informatika. UK Web Host Review dia nanamboatra an'ity sary ity hamorona lisitry ny fiasa heverin'izy ireo fa tokony hampidirina amin'ny fisian'ireo orinasa an-tserasera. Mba hahombiazan'ny orinasanao amin'ny Internet dia mila mahazo antoka ianao fa feno endrika ny tranokalanao! Betsaka ny pitsopitsony kely izay afaka manisy tsy fitoviana rehetra - na amin'ny resaka fanomezana ny mpanjifa izany
Ahoana ny fampifangaroana ny varotra atiny
Sabotsy, Oktobra 31, 2015 Douglas Karr
Nahafinaritra ahy ity infographic avy amin'ny JBH ity sy ny tantara sy ny sary vokariny rehefa mieritreritra momba ny atiny ianao. 77% ny mpivarotra izao no mampiasa marketing votoaty ary 69% ny marika no mamorona atiny betsaka noho ny tamin'ny herintaona lasa izay. Ary toy ny ananan'ny tsirairay ny fitsirony ny cocktail tiany indrindra, dia ilaina ny mahatadidy fa isan-karazany ny mpihaino anao - miaraka amin'ny maro no mankafy karazana atiny sasany noho ny hafa. Hanampy anao hanatsara ny varotra atiny
Ny fahombiazan'ny karazana atiny ao amin'ny B2B Marketing Media
Sabotsy, Martsa 7, 2015 Douglas Karr
Iza amin'ireo karazana atiny no avoaka amin'ny media sosialy izay misy fiatraikany lehibe indrindra? Mety ho gaga ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ity lisitry ny karazana atiny ity dia tsy izay mahomby indrindra amin'ny ankapobeny - valiny fotsiny avy amin'ireo mpividy B2B momba ny atiny izay nisy fiatraikany lehibe indrindra taorian'ny fahitan'izy ireo azy rehefa nozaraina ara-tsosialy. Amin'ny laharam-pahamehana, ity ny lisitr'ireo karazana atiny misy fiatraikany lehibe indrindra miaraka amin'ny famaritana avy amin'ny Eccolo Media: Case Studies - sary amin'ny antsipiriany